दशैंका लागि नयाँ नोट साट्ने ? यी ठाउँमा जानुस् - Everest Dainik - News from Nepal
दशैंका लागि नयाँ नोट साट्ने ? यी ठाउँमा जानुस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट सटहीका लागि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थान तोकेको छ । नयाँ नोट असोज १० देखि १७ गतेसम्म साट्न पाइने छ । बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँका नोट सटहीको व्यवस्था मिलाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र विभिन्न बैंकसँग मिलेर नयाँ नोट सटही गर्न सकिने छ भने उपत्यका बाहिर आफ्ना कार्यालयबाट मात्रै त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको हो ।
अघिल्ला वर्षमा नोट साट्ने मुख्य थलो मानिएको थापाथली कार्यालयबाट भने यस वर्ष नयाँ नोट पाइने छैन । थापाथलीको कार्यालय भवन पुनर्निर्माण भइरहेकाले त्यहाँबाट नयाँ नोट नबाँड्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटारबाट भने यस वर्ष नयाँ नोट वितरण गरिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस एटीएमबाट फेरि दैनिक १ लाख झिक्न पाइने
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नोट पाइने स्थानहरु
उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैंकबाहेक नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका शाखाबाट सेवाग्राहीले नयाँ नोट सटही गर्नसक्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, नेपाल बैंक लिमिटेडका उपत्यकास्थित ७ वटा शाखाले नयाँ नोट वितरण गर्नेछन् । न्युरोड, कीर्तिपुर, महाराजगञ्ज, जोरपाटी, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिम्पाट र भक्तपुर शाखाबाट नयाँ नोट साट्न सकिने छ ।
याे पनि पढ्नुस आज कुन देशको विनिमयदर कति? (सूचीसहित)
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकतर्फ सिंहदरबार प्लाजास्थित केन्द्रीय कार्यालयसँगै सिंहदरबार परिसर, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमि, विशाल बजार, नक्साल, बालाजु, लुभु र टोखा शाखा कार्यालयले असोज १० देखि १७ गतेसम्म सेवाग्राहीलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराउने छन् ।
कृषि विकास बैंकले भने काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा शाखा गौशाला, गठ्ठाघर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, थानकोट र पुल्चोकबाट पैसा साट्न सकिने छ ।
ट्याग्स: नयाँ नोट, नेपाल राष्ट्र बैंक